မိုးလေ ၀ သဆိုင်ရာကိရိယာများဆိုတာဘာလဲ။ သူတို့ဘာတွေလုပ်နေလဲ | ကွန်ယက်မိုးလေဝသ
မိုးလေဝသတူရိယာများနှင့်၎င်းတို့၏ function ကို
မော်နီကာဆန် | | အပ်ဒိတ်လုပ်ထားသည်။ 05/04/2019 13:57 | မိုးလေဝသတူရိယာ
အကယ်၍ သင်မိုးလေ ၀ သနှင့်ဇလဗေဒဆိုင်ရာအသည်းအသန်ဖြစ်ပါက၊ မိုးလေဝသဌာနအမှန်တရားလား မော်ဒယ်များစွာရှိသော်လည်းအချို့သည်သူတို့၏စျေးနှုန်းအပေါ် မူတည်၍ အခြားသူများထက် ပို၍ ပြီးပြည့်စုံသောအချို့ရှိပါသည်။ စင်စစ်အားဖြင့်စျေးအကြီးဆုံးမှာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုများကိုတိုင်းတာနိုင်သောသူများဖြစ်ပြီးထို့ကြောင့်၎င်းတို့ဒေသရှိရာသီဥတုကိုနက်နက်နဲနဲသိလိုသူများအတွက်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည်။ စျေးအချိုဆုံးသည်လိုက်လျောညီထွေရှိသူများအတွက် ပို၍ ဖြစ်သည်။ တစ်နေ့တာအတွင်းမှတ်တမ်းတင်ထားသောအပူချိန်ကိုသိခြင်းနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်စိုထိုင်းဆကိုသိခြင်းနှင့်အတူ။
သင်အသုံးပြုမည့်အရာပေါ် မူတည်၍ ၎င်းသည်စိတ်ဝင်စားရန်စိတ်ဝင်စားလိမ့်မည် ဘယ်မိုးလေဝသတူရိယာများနှင့်၎င်းတို့တစ်ခုစီတွင်မည်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်သင့်အတွက်အသင့်တော်ဆုံးမော်ဒယ်ကိုရွေးချယ်ရန် ပို၍ လွယ်ကူလိမ့်မည်။
1 ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးရှိသည့်မိုးလေ ၀ သဆိုင်ရာဇယားတစ်ခုမှသာမိုမီတာ
2 မိုးလေဝသမိုးရွာရွာ gauge
2.1 မိုးလေ ၀ သခန့်မှန်းချက်အမျိုးအစားများ
3.1 hygrometers အမျိုးအစားများ
ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးရှိသည့်မိုးလေ ၀ သဆိုင်ရာဇယားတစ်ခုမှသာမိုမီတာ
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ထူးကဲစွာဖြင့်မိုးလေဝသဆိုင်ရာစံသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုမှတစ်ခုကိုရွေးရန်လိုပါကကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်သာမိုမီတာကိုယူကြလိမ့်မည်။ ၎င်းကိုကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သိနိုင်သောကြောင့်၎င်းသည်အသုံးအများဆုံးကိရိယာဖြစ်သည် ကျနော်တို့ကကြည့်တဲ့အခါမှာဘယ်အပူချိန်မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူအမြင့်ဆုံးအပူချိန်ကို (-31'5ºCနှင့် 51'5 measureC အကြား) သာလျှင်အနည်းဆုံး (-44'5ºCနှင့်40'5ºC) အကြားသာလျှင်အချို့သောအရာများကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ အသုံးအများဆုံးဖြစ်သော်လည်းနှစ်ခုလုံးကိုတူညီသောဘူတာရုံဖန်သားပြင်တွင်တွေ့မြင်နိုင်သည်။
သာမိုမီတာအမျိုးအစားများစွာရှိသည် - ဓာတ်ငွေ့၊ ခုခံမှု၊ လက်တွေ့…သို့သော်မာကျူရီနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်တို့ကိုမိုးလေ ၀ သဌာနတွင်အသုံးပြုသည်။
၎င်းသည်အတွင်း၌ပြဒါးပါသောတံဆိပ်ခတ်ထားသောဖန်ပြွန်ဖြစ်သည်။ အပူချိန်လည်းပြောင်းလဲသွားသည်နှင့်အမျှ၎င်း၏အသံအတိုးအကျယ်ပြောင်းလဲသွားသည်။ ဒီကိရိယာကို ၁၇၁၄ ခုနှစ်မှာဂါဗြေလ Fahrenheit ကတီထွင်ခဲ့သည်။
အများဆုံးခေတ်မီ ၎င်းတို့သည်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်များ (ဥပမာပြဒါးကဲ့သို့) ကို အသုံးပြု၍ ဗို့အားသေးငယ်သောပြောင်းလဲမှုကိုနံပါတ်များအဖြစ်ပြောင်းလဲရန်အီလက်ထရောနစ်ဆားကစ်များကအသုံးပြုကြသည်။ ဒီလိုမျိုး, မှတ်တမ်းတင်ထားသောအပူချိန် display ကိုပေါ်လာပါလိမ့်မယ်.
ဤရွေ့ကားမိုးလေဝသတူရိယာ ၎င်းသည်နေရာချသည့်theရိယာသို့ကျသွားသည့်ရေပမာဏကိုတိုင်းတာသည်။ မီလီမီတာတစ်ခုစီသည်တစ်လီတာကိုကိုယ်စားပြုပြီးမိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းခြင်းမရှိသည့်နေ့များ၌ ၄ င်း၏ ၆ နာရီ (၄ င်း၏ပြင်းထန်မှုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မိုးတိုင်းတာခြင်းစွမ်းရည်ပေါ် မူတည်၍) တိုင်း ၄ င်းကိုစစ်ဆေးရန်အထူးအကြံပြုလိုပါသည်၊ သို့မှသာမှတ်တမ်းသည်တိကျမှန်ကန်မှုရှိသည်။ ဖြစ်နိုင်တယ်
မိုးလေ ၀ သခန့်မှန်းချက်အမျိုးအစားများ
မိုးလေဝသမိုးလေ ၀ သတိုင်းတာခြင်းပုံစံနှစ်မျိုး - လက်စွဲနှင့်စုစုပေါင်း။
လက်စွဲသူတို့ဟာဈေးအပေါဆုံးပဲ ၎င်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်အစိမ်းရောင်ရှိပလတ်စတစ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောဆလင်ဒါပုံစံခွက်တစ်ခုဖြစ်သည် မီလီမီတာတိုင်းတာသောဘွဲ့ရစကေးနှင့်အတူ.
စုစုပေါင်း- စုစုပေါင်းမိုးလေဝသမိုးလေ ၀ သတိုင်းတာမှုသည်တိကျမှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည် ၁၂ နာရီလျှင်ရေကျသောရေကိုမှတ်တမ်းတင်သောအော်ပရေတာတစ် ဦး ။
အဆိုပါ hygrometer သိရန်အလွန်အသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ် လေထုထဲတွင်ဆွေမျိုးစိုထိုင်းဆ၏ရာခိုင်နှုန်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့areaရိယာထဲမှာဘာ။ ရလဒ်0နှင့် 100% အကြားထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေကြသည်။ ၎င်းပမာဏသည်လေထဲရှိရေငွေ့ပမာဏ၏ရာခိုင်နှုန်းကိုကိုယ်စားပြုသည်။
ဤရွေ့ကားမိုးလေ ၀ သဆိုင်ရာတူရိယာများကို၎င်းတို့ကို analog သို့မဟုတ် digital ဖြစ်မဖြစ်ခွဲခြားသည်။
analogအလွန်မြင့်မားသောတိကျမှုကြောင့်ပေါ်လွင်ထင်ရှားသည်၊ အကြောင်းမှာပတ်ဝန်းကျင်ရှိစိုထိုင်းဆပြောင်းလဲမှုကိုချက်ချင်းနီးပါးတွေ့ရှိသည်။ သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံ သင်သည်ထိုသူတို့ချိန်ညှိရန်ရှိသည်ထို့ကြောင့်သူတို့သည်များသောအားဖြင့်များစွာသောရောင်းအားများမရောင်းကြပါ။
ဒစ်ဂျစ်တယ်ဒစ်ဂျစ်တယ်တွေကတိကျတယ်၊ သူတို့ကမည်သည့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမလိုအပ်ပါနှင့်လည်း သူတို့ကချက်ချင်းဝယ်ယူပြီးနောက်သုံးစွဲဖို့အဆင်သင့်ရှိပါတယ်.
ဘာရိုမီတာတစ်ခုဖြစ်သည် ကမ္ဘာ့မျက်နှာပြင်အထက်လေထု၏အလေးချိန်ကိုတိုင်းတာသည်, လေထုဖိအား၏အမည်အားဖြင့်လူသိများသည်။ ပထမ ဦး ဆုံးရူပဗေဒပညာရှင် Torricelli က ၁၆၄၃ တွင်ရိုးရှင်းသောစမ်းသပ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ပြီးနောက်တီထွင်ခဲ့သည်။
ပထမဆုံးသူလုပ်ခဲ့တာကဖန်ပြွန်ကိုမာကျူရီတစ်ခုနဲ့ပြည့်အောင်ဖြည့်ပြီးပြဒါးတစ်ချောင်းကိုပြောင်းလိုက်တယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာပြဒါးကော်လံသည်စင်တီမီတာအနည်းငယ်ကျဆင်းသွားသည်။ ၇၆ စင်တီမီတာ (၇၆၀ မီလီမီတာ) ခန့်မြင့်သည်။ ထို့ကြောင့်မီလီမီတာ၏ပြဒါးသို့မဟုတ်မီလီဂရမ်ထွန်းကားခဲ့သည်။
သို့သော်အခြားအရာတစ်ခုရှိသေးသည်။ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်တွင်ပုံမှန်လေထုဖိအားသည် ၇၆၀mmHg ဖြစ်သည် ရာသီဥတုကောင်းမလား၊ မသွားဘူးလားဆိုတာသိဖို့ဒီရည်ညွှန်းအချက်အလက်တွေရနိုင်တယ်။ ဘယ်လိုလဲ? အလွန်လွယ်ကူပါတယ်။ သိသိသာသာကျဆင်းသွားတယ်ဆိုရင်သင်မုန်တိုင်းနီးပြီဆိုတာသိရလိမ့်မယ်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်၎င်းသည်ဖြည်းဖြည်းချင်းတက်သွားပါကထီးကိုနောက်ထပ်ရက်အနည်းငယ်သိုလှောင်ထားနိုင်သည်။
ဤမိုးလေဝသဆိုင်ရာကိရိယာများမှကျေးဇူးတင်ပါသည် လေတိုက်နှုန်း။ အသုံးအများဆုံးမှာ windlass ဟုခေါ်သည်။ သူတို့ကကီလိုမီတာ / h အမြန်နှုန်းတိုင်းတာ။
လေသည် windlass ကို 'ထိ' သောအခါလှည့်သည်။ ၎င်းအားအလှည့်သည်ကောင်တာမှဖတ်သည်သို့မဟုတ် anemograph ဖြစ်လျှင်စက္ကူတစ်ရွက်ပေါ်တွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။
အဆိုပါ heliograph သောမိုးလေဝသတူရိယာတစ်ခုဖြစ်သည် ကျွန်တော်တို့ကို insolation ၏အချိန်ကိုတိုင်းတာရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ ၎င်းကိုပထဝီလတ္တီကျူအရနှင့်သင်နေသည့်နှစ်၏ရာသီနှင့်အညီချိန်ညှိရမည်၊ အကြောင်းမှာနှစ်သည်တစ်နှစ်ကုန်ဆုံးသည်နှင့်နေအမြင့်ကွဲပြားသည်။
အကျော်ကြားဆုံးမှာ Campbell-Stokes heliograph ဖြစ်ပြီးဖန်ထည်တစ်ခုဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောမှန်ဘီလူးများကဲ့သို့ပြုမူသည်။ နေရောင်ခြည်များဖြတ်သန်းသွားသောအခါ အသံသွင်းထားသောကဒ်ကို 'မီးရှို့' ပြီးထိုနေ့၌နေရောင်ခြည်၏နာရီများကိုကျွန်ုပ်တို့သိနိုင်သည်။
အဆိုပါ nivometer ရန်အသုံးပြုသည် သတ်မှတ်ထားသောအချိန်၌နှင်းကျသွားသောပမာဏကိုတိုင်းတာပါ။ အမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိသည်။ လေဆာကိုမှတ်ပုံတင်ရန်မြေပြင်သို့မောင်းနှင်ရမည်၊ နှင့် acoustic သည် ultrasonic wave transmitter-receiver ကြောင့်မိုsnow်းပွင့်နှင့်ထိတွေ့စရာမလိုပါ။
ယေဘုယျအားဖြင့်မိုးလေဝသဌာနသည် ပို၍ စျေးကြီးလေလေ၊ သင်ပေးချင်သောအသုံးပြုမှုပေါ် မူတည်၍ ငွေအမြောက်အမြားသုံးစွဲရန်မလိုအပ်ပေ၊ တဖန်ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်၊ သင်သည်ပိုမိုသိလိုပါကသင်ပိုမိုသိရှိလိုပါကဈေးနှုန်းချိုသာစွာရောင်းချရန် ၀ ယ်ရန်မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့်၊ ဒါပေမယ့်သေချာတာပေါ့သင်ကအများကြီးပိုပြီးခံစားနိုင်ပါတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » မိုးလေဝသ » မိုးလေဝသတူရိယာ » မိုးလေဝသတူရိယာများနှင့်၎င်းတို့၏ function ကို
ဆိုဖီယာရှင်းရှင်းလင်းလင်း gonzales ဟုသူကပြောသည်
sofia claro gonzales သို့ပြန်သွားပါ
mariangel you ခင်ဗျားအတွက်လည်းအသုံးဝင်တာဝမ်းသာပါတယ်။
ငါမိုးလေ ၀ သဗေဒကိုနှစ်သက်တယ်။
ငါ့ကိုကူညီပေးရန်သော endometer ကြောင်းစကားမစပ် !!!
Hola Hector ။
မင်းကိုစိတ် ၀ င်စားတဲ့အတွက်ငါဝမ်းသာပါတယ်
Endometer ငါဘာလဲဆိုတာမသိဘူး၊ တောင်းပန်ပါတယ် ငါတစ်ခုခုရှာတွေ့လျှင်နှင့်ဘာမျှမပေါ်လာလျှင်ကြည့်ဖို့အင်တာနက်ရှာဖွေနေ; ရာသီဥတုနှင့်လုံးဝမသက်ဆိုင်သည့် endometrium ဟူသောဝေါဟာရကိုသာ (၎င်းသည်သားအိမ်တည်ရှိရာနေရာကိုဖုံးအုပ်ထားသည့် mucosa) ဖြစ်သည်။
ကောင်းပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ monica sanchez ငါလည်းဒီ endrometrium ကိုရတယ်၊ ဒါမှမဟုတ်ဒါကမကောင်းဘူးမဟုတ်လား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Isai burgos ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ဝမ်းနည်းပါတယ်၊ ကျွန်ုပ် anemocinemographer အကြောင်းသိချင်တယ် ????
isai burgos သို့ပြန်သွားရန်
၎င်းသည်ရာသီဥတုအခြေအနေ (လေ ဦး တည်ချက်ကိုတိုင်းတာရန်)၊ လေအားနှုန်းကိုတိုင်းတာရန် anemometer (ဗဟိုလေယူနစ်) ကိုပေါင်းစပ်ပေးသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဗဟိုယူနစ်နှင့်အချက်အလက်များကိုမှတ်တမ်းတင်သည်။
မင်္ဂလာပါ, နေကောင်းလား ငါမေးရန်စုံစမ်းမှုရှိသည်။ ဒီဂရီဒီဂရီမီတာကိုပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက်အမြင့်အတွက်ချိန်ညှိထားသည်မှာမှန်ပါသလား။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်သည်ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက်မီတာ ၅၀၀ တွင်ရောက်နေပါက hygrometer သည်ကျွန်ုပ်အားတိကျမှန်ကန်စွာပေးနိုင်သောစာဖတ်ခြင်းလား။
Juan Manuel အားပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါ Juan Manuel
Jose Manuel Carrasco Nalvarte ဟုသူကပြောသည်
José Manuel Carrasco Nalvarte ကိုပြန်ပြောပါ
အပူချိန်၊ လေ၏ ဦး တည်ရာနှင့်အမြန်နှုန်း၊ မတူညီသောမိုးလေ ၀ သဖြစ်စဉ်များနှင့်စသည်တို့ကွဲပြားခြားနားသောဂေဟစနစ်အပေါ်မည်သို့သက်ရောက်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားသိရန်ခွင့်ပြုခြင်းကြောင့်မိုးလေ ၀ သဗေဒသည်အရေးကြီးသည်။
မင်္ဂလာပါ၊ ခေါင်းလောင်းထိပ်မှာရှိတဲ့ဒီမိုးလေ ၀ သဆိုင်ရာစက်ကိရိယာဆိုတာဘာလဲ
Camila Damian ဟုသူကပြောသည်
ငါအရမ်းချစ်တယ်၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ အရမ်းကောင်းတဲ့ပစ္စည်းကငါ့ကိုအများကြီးကူညီခဲ့တယ်
Camila damian သို့ပြန်သွားပါ
ဟယ်လိုငါ့နာမည် CARLOS ဆိုတာငါပါ။ ငါနေတဲ့နေရာမှာငါကူညီနိုင်မယ်ဆိုရင်ငါသိတဲ့အတိုင်းငါနေထိုင်ရာနေရာအတွက်မိုးလေ ၀ သညွှန်ကြားချက်တွေဆောက်လုပ်ပေးရာရေအကြောင်းသိချင်တယ်။
ဗစ်တာ M ကလိုပက်ဇ် B ဟုသူကပြောသည်
သင်သည် (၁) မီလီမီတာပြိုလဲသောရေသည်စတုရန်းမီတာ (1) ရှိinရိယာတွင် ၁ (၁) လီတာရေပမာဏကိုကိုယ်စားပြုကြောင်းဖော်ပြသင့်သည်။
ဗစ်တာ M လိုပက်ဇ် B ကိုပြန်ပြောပါ
ပြင်သစ် alejandra lameda molleda ဟုသူကပြောသည်
ယနေ့မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ကလေးများနှင့်မိုးလေ ၀ သနှင့်ဆက်စပ်သောအရာအားလုံးကိုသင်ယူခဲ့သည်
Francis alejandra lameda molleda အားပြန်ပြောပါ
Carlos Daniel ဟုသူကပြောသည်
carlos daniel သို့ပြန်သွားပါ
ငါကအထက်တန်းကျောင်းမှာပေးနေတဲ့အတွက်ငါ့အဖိုးရဲ့အိုင်ပက်ဒစ်ဂျစ်တယ်ကဒ်ကိုမတင်ဘူး။ ဒီကတ်တွေကိုမနက်ဖြန်ပေးထားတယ်။ ဒီတော့ဒီနေ့သူတို့ကိုငါကြည့်လို့မရဘူး။
လွန်ခဲ့တဲ့7လအတွင်း
ပြပွဲတစ်ခုရှိလို့ ဒီအချက်အလက်က အများကြီး ကူညီပေးလို့ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် ❤❤❤❤❤❤❤❤❤????❣
ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုသည်အမေရိကန်များအားပိုမိုလေ့ကျင့်ရန် ဦး ဆောင်လိမ့်မည်